Blog Action Day 2011: Andao Hiresaka Momba Ny Sakafo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2011 6:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, македонски, srpski, বাংলা, Shqip, 繁體中文, 简体中文, English
Ny Blog Action Day dia hetsika fanao isan-taona izay iarahan'ireo mpitoraka bilaogy eran-tany manoratra mikasika olana iray ao anatin'ny andro iray. Ny tanjona dia ny hametrahana fampahatsiarovan-tena sy ny hitarihana adi-hevitra eran-tany mikasika ny olana goavana iray izay miantraika amintsika rehetra.
Ny Global Voices dia nanao tatitra momba ireo Blog Action Day nisy teo aloha ary nanampy tamin'ny fizarana tantara fohy toy ny momba ny Rano tamin'ny 2010 sy Fiovan'ny Toetr'andro tamin'ny 2009. Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia ny sakafo, satria ny Blog Action Day dia mifandraika amin'ny Andro iraisam-pirenenena ho an'ny sakafo, hetsika iray karakarain'ny Sampan'ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo sy ny Fambolena.
Ireo mpanoratra ao amin'ny Global Voices dia efa nanoratra betsaka mikasika ny sakafo. Vao haingana, ny tatitra manokana momba ireo Tanjon'ny Firenena Mikambana ho an'ny Fampivoarana ny Taonarivo amin'ny 2011 dia ahitàna andian-dahatsoratra momba ny ady amin'ny kere sy ny fahantrana. Nangatahana ihany koa ny fikambananay hanao andian-dahatsoratra momba ny Tsy Fanjariana Ara-tsakafo miaraka amin'ny Pulitzer Center momba ny Fitaterana ny Olana. Ny tatitray dia nalaina tamin'ny fandraisan'anjaran'ny fahampahalalam-baovaon'olon-tsotra ary asongadina ao amin'ny Pulitzer Gateway to Food Insecurity (Vavahadin-tseraseran'ny Pullitzer momba ny tsy fahampian-tsakafo).
Ny Acarajé dia sakafo vita avy amin'ny petit-pois (karazana voa) voavaofy novolavolaina ho lasa boribory ary avy eo nendasina amin'ny dendê (menaka voanio). Fomba fandrahoana sakafo hita any Nizeria sy Brezila. Izy io dia sakafo nentim-paharazana any amin'ny faritra Avaratra Atsinanan'i Bahia any Brezila. Sary an'i Rita Ribeiro ao amin'ny Flickr. CC-BY-NC-SA 2.0
Ao amin'ny tranokalan'ny Blog Action Day ny fanasana izay misokatra ho an'ny rehetra manana Bilaogy. Hitanao ato ny lisitr'ireo lohahevitra naroso, ary ny sasany amin'izy ireo dia mahakasika ny kere amin'ny faritr'i Afrika Atsinanana, hanoanana sy fahantrana, tsy fahampian-tsakafo sy ady ara-tsakafo.
Fa raha tianao ny tsy dia hiresaka zavatra matotra loatra amin'ny Blog Action Day, dia azonao atao ny manoratra momba ny sakafo tianao indrindra, sakafo voajanahary na ny “tsy fihinanan-kena”. Betsaka no azo lazaina momba ny sakafo, ary ny lohahevitra dia mizarazara ho toe-draharaha sy olana maro samihafa:
Isika dia mampiasa ny sakafo hanamarihana fankalazana sy fahoriana. Ny tsy fisian-tsakafo dia miteraka kere manimba mahatsiravina, nefa raha be loatra dia mitarika karazana olana ara-pahasalamana vaovao. Mety ho lafo loatra ho an'izao tontolo izao izy, na mora loatra ho an'ny tantsaha ka tsy ampy hivelomany.
Ny fomba famokarantsika orinasa sakafo sy zava-pisotro dia afaka manome asa manana ny lanjany ho an'ny fiaraha-monintsika na miteraka fahasimbana tanteraka ho an'ny tontolo iainana sy ireo mpamokatra sakafo eny an-toerana. Ny sakafo dia afaka manome hery ho antsika hamakivakiana ny tontolo andro na misy akora izay mitarika tsy fahazakàna ho an'ny tenantsika.
Ny sakafo dia mety nandrahoinà mpahandro sakafo avo lenta izay manana fahaizana mamorona, na vokarina betsaka ary mora vita sy tsinjaraina eny amoron-dalana. Mety tena tsara ho an'ny fahasalamana izy na mety tena poizina ary ratsy ho an'ny fahasalamana. Mety ho tsara tsiro izy na sakafo mampiavaka eo an-toerana.
Ny sakafo dia zava-dehibe eo amin'ny kolontsaintsika, sy ny maha-isika antsika ary fivelomana isan'andro, ary ny ekipa ao amin'ny Blog Action dia manasa anao hiara-dia aminay hiresaka momba ny sakafo.
Raha liana ianao, vakio misimisy kokoa ny momba ny Sakafo avy amin'ny fomba fahitàn'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices.
Ary aza adino, 16 Oktobra no fotoana hitorahana bilaogy momba ny sakafo, na te-hanoratra mikasika olana sarotra momba ny sakafo ianao na hizara fotsiny amin'ny namanao ny sakafo tianao indrindra. Azonao atao ny mandray anjara amin'ity fifamotoanana anaty aterineto ity ary manampy amin'ny fampahatsiarovan-tena momba ny lohahevitra.
Misoràta anarana amin'ny Blog Action Day amin'ny alàlan'ny famenoana ity pejy ity, ary aza adino ny manaraka ny @BlogActionDay ao amin'ny Twitter.